Raysul wasaaraha oo Muqdisho kula shiray wakiilo ka socday dalalka maaligeliya Hiigsiga Cusub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Cabdiweli Shiikh Axmed ayaa maanta kula shirey magaalada Muqdisho wefdi ka socdey kooxda la yiraahdo G7+ oo ah deeq bixiyaasha ugu muhimsan Soomaaliya, isla markaana dhaqaalaha ku bixiya barnaamijka Hiigsiga Cusub “New Deal”.
Raysalwasaaraha waxaa kulanka ku weheliyey qaar kamid ah golihiisa wasiirada, sida Wasiirka Qorsheynta Siciid Cabdullaahi Deni.
Dhanka kale, Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa gabagabada shirka kadib warbaahinta la hadlay ayaa xusay in la isla gartay sidii loo dardargelin lahaa qorshaha New deal, sidoo kalena la is waafajiyo qorshaha xukuumada iyo qorshaha new deal.
“Arrimaha kale ee aan ka wadahadalnay waxaa ka mid ahaa dhaqangelinta nidaamka Federaalka, hagaajinta hay’addaha maaliyadda ee dawladda” ayuu yiri ugu dambeyntii Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga Deni.